Madaxweyne Farmaajo oo uambaxay Cummaan – Radio Daljir
Madaxweyne Farmaajo oo uambaxay Cummaan
Janaayo 13, 2020 8:43 b 0
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa saaka u ambabaxay dalka Cummaan, si uu uga qeyb galo Tacsida Qaran ee u taalla shacabka iyo Saldanada Cummaan.
Sida wararku sheegayaan Madaxweyne Farmaajo ayaa diyaarad qaas ah ay saaka ka qaaday garoonka diyaaradaha Muqdisho, isagoo ku sii jeeda Caasimada Muscat.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka mid noqon doona Madax ka socota Caalamka oo qulqulaya dalka Cummaan si ay uga qeyb qaataan tacsida qaran ee loo sameynayo Suldaan Qaboos bin Said Al Said oo maalmo ka hor geeriyooday.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxaa gaaray dalka Cummaan madax ka socota Caalamka, waxaana ay ka tacsiyo gudanayeen Suldaanka cusub ee Cumaan Suldaan cusub ee Cummaan Sultan Haitham bin Tariq Al Said, kaddib geeridii Suldaan Qaboos.
Suldaan Qaboos ayaa ahaa Hoggaamiyihii ugu xukunka dheeraa ee Carab, waxaana uu ka talinayay Saldanada Cumaan muddo 50 sano ah.
Madaxweyne Deni oo Booqday xerada ciidamada PMPFta ee Boosaaso
Dowladda Gambia oo ka digtay in Yahya Jammeh uu ku soo laabto wadanka.